အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူသစ်ကြံပိုး 1.2 | Linux မှ
၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သစ်ကြမ်းပိုး ဒီဟာကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေပြီးရိုးရှင်းသောလမ်းဆုံလမ်းခွသို့ရောက်သွားသည် GNOME shell ကို.
စတင်သည် 1.2 ဗားရှင်း Desktop ပေါ်မှာနှင့်နှစ် ဦး စလုံးသာ။ ကြီးမြတ်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ API ကို နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းပါဝင်သည်။
1 Desktop အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
2 ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော Desktop Schemges
5 Menu တိုးတက်မှု
သစ်ကြံပိုး 1.2 desktop effect များကိုပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူအတွက် animations များကိုသတ်မှတ်ခြင်း (သို့) လုံးဝပိတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီ feature ကို Compiz effect ကိုနှစ်သက်သောသူများအတွက်ထပ်ထည့်ထားသည်။ ဒီဗားရှင်းကိုကာတွန်းနှစ်ခုအတွက်ပလပ်အင်များဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည် -
Fade, ပြတင်းပေါက်များ၏ opacity ကိုပြောင်းလဲပေးသော
အကူးအပြောင်းစတိုင် ၃၀ ထည့်ပါ။
ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော Desktop Schemges
သူတို့ကရှင်းလင်းချက်ပေမယ့် desktop ပေါ်မှာပစ္စည်းများကို (panel များလို) နေဆဲနှင့်အတူ, လွတ်လပ်စွာမရွှေ့နိုင် သစ်ကြံပိုး 1.2 Desktop အတွက်ကြိုတင်ဒီဇိုင်းသုံးမျိုးရွေးချယ်နိုင်သည်။
အောက်ခြေမှာ panel ကို (ပုံမှန်) ။
ထိပ်ပေါ်မှာ panel ကိုအတူ။
နှစ်ခုလုံးအတွက်ပြားနှင့်အတူ Gnome ဂန္ထဝင်။
ယခုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ သစ်ကြမ်းပိုး ဒါအများကြီးပိုလွယ်သည်။ ငါ့ကိုသတိပေးတဲ့ ဦး စားပေးမန်နေဂျာတစ် ဦး ထပ်ထည့်ထားသည် Mozilla Firefox ကို, ငါတို့ tabs များကစီစဉ်တစ်ခုချင်းစီကို option ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အခင်းအကျင်းများပြောင်းခြင်း၊ သက်ရောက်မှုများအသုံးပြုခြင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းများကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် desktop setting အချို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
သစ်ကြံပိုး 1.2 ၎င်းသည် desktop အတွက် applets လည်းပါဝင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ထဲက5သူတို့လာ:
စောငျ့ရှောကျ (XrandR အတွက်ထိန်းချုပ်မှု)
အဓိက menu ကိုသိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ သင်တစ်ခုခုရှာလျှင်အမျိုးအစားများသည်မလှုပ်မရှားဖြစ်လာပြီးနှိပ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည် [ENTER] ရှာဖွေပြီးနောက်ရလဒ်၏ပထမအပိုင်းကိုစတင်လိမ့်မည်။
အပြောင်းအလဲများကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေရန်လုပ်ခဲ့ကြသည် သစ်ကြမ်းပိုး နှင့်ဤအပြောင်းအလဲများကိုလည်းယခုနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့မဆိုကြင်နာထံမှထပ်မံသွားဆိုလို GNOME shell ကို.
သစ်ကြမ်းပိုး Muffin လို့ခေါ်တဲ့ Mutter fork ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် window manager ကိုအခုလုပ်နေပြီ။
သစ်ကြမ်းပိုး မှ themes များမရှိတော့ပါ GNOME shell ကို။ သို့သော်၎င်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ၏စတိုင်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည် GNOME shell ကို y သစ်ကြမ်းပိုးနှင့်၎င်းသည် desktop နှစ်မျိုးလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » အများအပြားအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူရရှိနိုင်သစ်ကြံပိုး 1.2
ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး "ပြောင်းလဲ" လုံးဝရန် သစ်ကြမ်းပိုး ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်မရဲ့ desktop ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာထားလို့မရဘူး ... အခုသင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ် http://i232.photobucket.com/albums/ee1/daytrippergirl/Pantallazodel2012-01-23220122.png
Clem အထူးသဖြင့်ကြာမြင့်စွာကပြောဆိုခဲ့ကြသူများစွာသောပါးစပ်အများအပြားနှုတ်ပိတ်နေသည် Linux Mint ကသာကပ်ပါးဖြစ်ပါတယ် Ubuntu ကို။ တောင်မှဖြစ်ခြင်း သစ်ကြမ်းပိုး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပြီးသား၏အနာဂတ်ထုတ်ဝေဘို့ကောင်းသောစိတ်ကူးကြည့်ရှုသည် Linux Mint
ငါအပြည့်အဝသဘောတူနှင့်သူတို့အား (ပါးစပ်) အတော်လေးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်ကြည့်ပါ
ကောင်းပြီ၊ Cinnamon ဟာကောင်းမွန်တဲ့ desktop တစ်ခုပါ။ Arch မှာငါသုံးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ရှည်လျားလှတဲ့လမ်းတွေရှိနေတုန်းပဲ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့အဲဒါကိုဘာမှမပြောင်းလဲတော့ဘူး။ 😀
ငါ gnome-shell ကို၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကြိုက်တတ်တဲ့နှင့်ငါသေချာနှင့်အတူ။ ငါ gnome2 ၌ကျောက်ချရပ်နားရန်မလိုချင်ပါ
သစ်ကြမ်းပိုး ဒါကအခွံတစ်ခုပါပဲ GNOME 3မဟုတ်ပါ GNOME 2
; TO; ကြည့်ရတာအရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတယ် ... ဒါကငါ့ကိုဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့စမ်းကြည့်ချင်တယ် ~ ငါ့စားပွဲခုံ (Xfce) ကိုမလွှတ်ချင်ဘူး
ဤကဲ့သို့သောအရာများများကကျွန်ုပ်၏ရဲရင့်သောရဲရင့်ခြင်းများကိုပြောပြလေ xD hahahahah ~ ကျွန်ုပ်၏စက်ကိုစမ်းသပ်ရန်မကြိုးစားတော့ပါ ~
အရင်ကြည့်ရအောင်။ ငါပြောတာက XFCE ကိုမဖယ်ရဘူး၊ Cinnamon ကို install လုပ်တယ်၊
ငါပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ဟာ LMDE နဲ့လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်သေးတာကိုငါအရမ်းဒေါသထွက်ပါတယ်။ desktop engine နဲ့ဆိုရင် Gnome ကိုယ်တိုင်က Mutter ကိုအစားထိုးဖို့သူ့ကိုလက်ခံမလားဆိုတာကိုငါသိချင်တယ်။
ပိုပြီးဒေါသထွက်လာတာနဲ့ gnome 3.2 ကနေ debian စမ်းသပ်မှုကိုဘယ်လောက်နှေးကွေးသွားသလဲဆိုတာငါနဲ့အတူရှိနေတယ်
တစ်ခုတည်းသောစမ်းသပ်ခြင်းမှာအခြေခံကျသော package များပျောက်နေသည်။ http://www.0d.be/debian/debian-gnome-3.2-status.html ဆိုလိုတာကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က ၉/၀ ဖြစ်လာတယ်။ သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနောက်ပြန်လှည့်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Tina က၊ gnome3နှင့် gnome2အတွက်ဖြစ်သည်၊ ငါကြည့်ပြီးပြီ၊ gnome2ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်ုပ်ရည်ညွှန်းပြီးဖြစ်သည်။ ငါ Gnome3နှင့်၎င်း၏အခွံများမည်သို့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်ကိုကြိုက်သည်။ ယနေ့ Mint အဖွဲ့မှ MGSE နှင့်သာပေါင်းစပ်လိုက်သည်။
အမျိုးသားများ၏အရသာအရသာအတွက်။ ကောင်းတာကငါတို့ရွေးစရာ option ရှိသည်။ ..
GNOME Shell သည်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ပါ၊ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကိုသင်၏ပြောင်းလဲမှုများကိုပယ်ရှားပြီးအရိုးရှင်းဆုံးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ပင်ခြေလှမ်းများလှမ်းရန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းဟုသင်မပြောနိုင်ပါ။
GNOME Shell နှင့် ပတ်သတ်၍ တစ်ခုတည်းသော "ဆန်းသစ်တီထွင်သော" အရာက၎င်းသည်ပုံမှန် menus များကိုဘေးဖယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်မလုပ်ခဲ့သောကြောင့်ဆိုးကျိုးများမဟုတ်ပါ။
မင်္ဂလာပါကျွန်တော့်အနေနဲ့သူတို့လုပ်နေတဲ့ခြေလှမ်းကကျွန်တော့်အတွက်တကယ့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။ ဖိုရမ်တွေမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်း mint အသုံးပြုသူများသာမကအခြားသူများလည်းပါ။ mint အကြောင်းပိုမိုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှကျွန်တော်မသိပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်သည်သံသယဖြစ်နေသည်ကိုမည်သူသိရှိနိုင်သည်ကိုသင်မသိပါ။ lmde အတွက် update pack4ထွက်လာတော့မည်ဆိုပါက၎င်းတို့တွင် kde ဗားရှင်းလည်းရှိသည်။ , သစ်ကြံပိုးခေါက်နဲ့ငါနောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ဘယ်လောက် developer တွေလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်အခုသူတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအင်တာဗျူးကောင်းမယ်မထင်ဘူးလား။
အကယ်၍ ၎င်းသည် anti gtk မဟုတ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်အတွက် java (ဤသည်မိုးသည်းထန်စွာ) xD ကဲ့သို့ပျောက်ကွယ်သွားသောဘာသာစကားဖြစ်လျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် Desktop တွေဘယ်လိုအလွယ်တကူ ၀ ယ်ရမလဲမသိဘူး။
Winbuntu နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ GTK + နဲ့သင်ကြုံတွေ့ရတယ်။
စကားမစပ် GTK + သည်ဘာသာစကားမဟုတ်ဘဲစာကြည့်တိုက်များဖြစ်သည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၌သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သင်္ကေတများရှိ qt application များရှိပြီး၎င်းတို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်သောဘုရားသခင်မရှိ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျန် GTK applications များငါနှစ်သက်သောစိတ်ကြိုက်နေကြသည်။
Terminal နှင့်အတူ - မည်သည့် command ကိုသင်အများဆုံးအသုံးပြုသည်ကိုရှာဖွေပါ